Tora mazana ematemplate eKeynote neMapeji pamutengo unosekesa | Ndinobva mac
Tora mazana ematemplate eKeynote neMapeji nemutengo unosetsa
Wakaneta nekuita mharidzo iyo yese inotaridzika zvakafanana? Iwe unoda kuratidza basa rekirasi mune dhizaini inokwezva kutarisisa uye kunakidza? Kubva ikozvino uchigona ipa mharidzo dzako uye basa rako rive nehanya zvakanyanya, hunyanzvi uye hwekutanga chitarisikoZvakanaka, nhasi ndinokuunzira mafomu maviri akanyatsogadzirirwa avo vanoshandisa Keynote uye / kana maPeji zuva nezuva, kunyangwe kana ukasadaro, ungangokurudzirwa kuenda kuhofisi suite pane block kuitira kuti basa rako rioneke zvirinani kupfuura nakare kose.
Icho chiri pamusoro Matemplate neMapeji y Matemplate naKeynote, mafomu maviri ari chaizvo zvaanovimbisa, matemplate eMapeji uye Keynote iyo iwe yaunogona kushandisa kune ako mharidzo uye ushande nenzira yakapusa uye yepakutanga, uye zvakanakisa zvese, pamutengo unoshamisa nekuti nhasi unogona kuzviwana ine dhisikaundi inopfuura makumi mapfumbamwe muzana.
1 Matemplate eKeynote
2 Bhizimusi Template Lab - Matemplate eMapeji
Chekutanga pane izvi zvinoshandiswa Matemplate eKeynote, chishandiso chekushandisa pamwe neiyo Keynote app paMac yako uye nekugona kuita yakasarudzika, yakasiyana, yekutanga mharidzo ine nyanzvi yekupedzisa. Iyo pack ine zvimwe zve 150 emhando yepamusoro matemplate eKeynote. Imwe yeaya matemplate anosanganisira anosvika makumi maviri neshanu tenzi masiraidhi, uye mashandiro ayo ari nyore kwazvo: sarudza dhizaini iwe waunofarira zvakanyanya, sarudza saizi yakakodzera kwazvo saizi mbiri dziripo (4: 3 kana 16: 9) uye tanga kuisa ruzivo rwehurukuro yako. Matemplate eKeynote Iyo yakagadzirirwa kuti iwe utarise pane izvo zvirimo zvemharidzo dzako pasina kunetseka nezve dhizaini.
Matemplate eKeynote chishandiso chakagadzirwa neGraphic Node timu, inoona nezve kuidzokorora kazhinji uye inosanganisira zvinyorwa zvitsva. Muchokwadi, kugadziridza kwayo kwekupedzisira hakusviki mwedzi wapfuura, muna Kubvumbi 24, uye kwaisanganisira kuiswa kwe gumi nemaviri matemplateace weKeynote.
Matemplate eKeynote Inoda yazvino vhezheni yeKeynote yakaiswa paMac yako, uye inoenderana nemakomputa anomhanya macOS 10.12 uye kumusoro.
Matemplate eKeynote chikamu chemushandirapamwe weMac App Store Sale uyo vhiki yega yega unotiunzira maviri ekumabhizimusi akabhadharwa emhando yepamusoro nezvideredzwa zvinopfuura makumi mapfumbamwe muzana. Vhiki rinotanga neiyi huru app ine mutengo wenguva dzose uri € 24,99 asi ikozvino unogona kuiswa pane yako Mac komputa kwe € 1,09 chete kwenguva shoma. Kupihwa kwatanga nhasi uye kuchashanda kusvika mangwana, Chitatu Chivabvu 24 na23: 59 pm, zvisinei, nekuda kwenzvimbo dzenguva, kana uchiifarira, ndinokuraira kuti utore nekukurumidza sezvazvinogona kuti ubatsirwe kubva pakubvisa.
Bhizimusi Template Lab - Matemplate eMapeji
Iyo yechipiri kunyorera kwandinounza kwauri paunopa nhasi yakafanana chaizvo neiyo yapfuura, kunyangwe mune ino kesi iri matemplate ekuita kuti basa rako muMapeji rioneke zvakanyanya hunyanzvi uye hwepakutanga.
Yakagadzirwa nechikwata cheJumsoft, Bhizinesi Matemplate Lab eMapeji Iyo pasuru iyo inosanganisira mazana ematemplate akanyanya kugadziriswa iyo iwe yaunogona kushandisa zviri nyore neMapeji kugadzira zvinyorwa, marati esangano, mabrochure, zviziviso, mabhizinesi ebhizinesi, mafomu, mavovoice, machati esangano, kukoka, makarenda, kuronga, uye zvimwe zvakawanda.
Kunge yekutanga, chinangwa chayo ndechekuti iwe unogona kutarisa pane izvo zvirimo uchikanganwa nezve dhizaini. Kune izvi, mashandiro ayo ari nyore senge yapfuura iyo Matemplate eKeynote: Ingosarudza template uye wotanga kuigadzirisa nezvako zvemukati. Neiyi nzira, ako mabasa anozove neakasarudzika uye ekutanga chitarisiko icho chinofadza.
Uyewo, Bhizinesi Matemplate Lab eMapeji inovandudzwa kazhinji kusanganisira nyowani nyanzvi uye akasarudzika matemplate.
Bhizinesi Matemplate Lab eMapeji inoda Mapeji vhezheni 5.6 uye OS X 10.11 kana gare gare. Icho chikamu cheMadhora mairi Chipiri mushandirapamwe kuti iwe ugone kuitora chete € 2,29 pane yakajairwa € 19,99 kusvika mangwana manheru.
NOTA: kana ini ndinobva kuMac kana ini handina chero hukama hwehukama nevagadziri vezvakamboitwa maficha uye hatina kana chekuita nezvakapihwa zvinotsanangurwa navo. Tinogona chete kuvimbisa kuti kukwidziridzwa kuri kushanda panguva yekutsikisa ichi posvo sezvo isu tisingazive chero shanduko yesarudzo mune iyi nyaya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Tora mazana ematemplate eKeynote neMapeji nemutengo unosetsa
iTunes inogadziridzwa neshanduko diki kune vhezheni 12.6.1.27
Apple Bhadhara uye Visa vakamhan'arirwa nekuda kwekutyorwa kwepatent